Uludwe lweeMerika apho i-Marijuana yokuNwabisa iSebenzisi iLungelo
Apho Unokuthengwa Nokuba Utshaye Umsila e-US Ngaphandle kokuba Ukhishwe
Amaqhosha ayisishiyagalombili asetyenzise ngokusemthethweni ukuzonwabisa kwe-marijuana e-United States. Ziyi-Alaska, eCalifornia, eColorado, eMaine, eMassachusetts, eNevada, eOregon naseWashington. IWashington, DC, ikwavumela nokusetyenziswa kokuzonwabisa ngokugqithisa inambuzane.
Ziphakathi kwama-30 amazwe avumela ukusetyenziswa kwegogu ngenye indlela; Uninzi lwabantu luvumela ukusetyenziswa kwelo lwazi kwiinjongo zokwelapha. Ezi sibhozo zichaza ukuba ukusetyenziswa kokuzonwabisa ngokusemthethweni kunemithetho eninzi kakhulu kwiincwadi.
Nazi iindawo apho umgogodla usebenzisa khona ngokomthetho. Akwabandakanyi amazwe athi ahlasele ixabiso elincinci le-marijuana okanye amazwe avumela ukusetyenziswa kwegogu ngenjongo yezonyango. Kwakhona kubalulekile ukuqaphela ukuba ukukhula nokuthengisa inambuzane kungekho mthethweni phantsi komthetho we-federal, nangona lo mthetho awunyanzeliswa ngummeli jikelele we-US.
I-Alaska yaba ngumbuso wesithathu ukuvumela i-marijuana yokuzonwabisa ekusebenziseni ngoFebruwari 2015. Ukumisela umgodla e-Alaska kwavela ngumbono wokuvota ngoNovemba 2014, xa ama-53 ekhulwini kwabavoti bexhasa ukuhamba ukuvumela ukusetyenziswa kwezinto kwiindawo ezizimeleyo. I-pot yokubhema kuluntu, nangona kunjalo, iyahlawulwa yinto ehlambulukileyo ye $ 100. Ukusetyenziswa kwangasese kwegunja e-Alaska kwaqala ukuvakaliswa ngokufanelekileyo ngo-1975 xa inkundla ephakamileyo yelizwe iwise isigwebo sokuba ixabiso elincinci likhuselwe phantsi kwesiqinisekiso somgaqo-siseko soburhulumente.
Ngaphantsi kwe-Alaska umthetho welizwe, abantu abadala abadala abangama-21 nangaphezulu banokufikelela kwi-ounce ye-marijuana kwaye banesityalo esithandathu.
Abameli belizwe laseCalifornia baseburhulumenteni basemthethweni bawasebenzisa ngokufanelekileyo ukuzonwabisa kwentambo yegunyi kwinqanaba le-Proposition 64 ngoNovemba 2016, okwenza kube ngumbuso omkhulu ukwenza ukusetyenziswa kweebhodini kulungile. Umlinganiselo wawunenkxaso yeepesenti ezingama-57 zowiso-mthetho apho.
Ukuthengisa inambuzane kwathathwa ngokusemthethweni ngo-2018. "I-Cannabis ngoku yomthetho kwilizwe elininzi kakhulu emhlabeni, ngokunyusa ngokukhawuleza ubungakanani bebonke beli shishini ngelixa kusekwa iimarike ezisebenzisayo zomthetho jikelele kwi-US Pacific Coast zinikezelwe ngamazwe aseWashington asemthethweni. Oregon, "kuchaza iDatha yeFrontier Data, elandelela imboni ye-cannabis.
Iqalo lokuvota e-Colorado libizwa ngokuba ngu-Amendment 64. Isiphakamiso esadluliselwa ngo-2012 ngenkxaso evela kuma-55.3 ekhulwini kwabavoti kwimeko kaNovemba 6, 2012. IColorado neWashington yizona zihlandlo zokuqala kulolu hlanga ukuba zivumeleke ukusetyenziswa kwezinto ezinokuziqhelanisa. Ukulungiswa komgaqo-siseko womgaqo-nkqubo kuvumela nawuphi na umntu ohlala ngaphaya kweminyaka engama-21 ukuba athathe i-ounce, okanye i-28,5 grams, yengcambu. Abahlali banokukhula kunye nenani elincinci lezityalo zengcambu phantsi kohlengahlengiso. Kuhlala kungekho mthethweni ukutshaya i-marijuana kuluntu. Ukongeza, abantu ngabanye abakwazi ukuthengisa loo nto ngokwabo eColorado. I-Marijuana ityala ngokuthengiswa kuphela kwiivenkile ezisemgangathweni zifana nezo ezininzi kwiindawo ezithengisa utywala. Izinto zokuqala ezinjalo kulindeleke ukuba zivule ngo-2014, ngokwemibiko epapashwe.
I-Colorado Gov. uJohn Hickenlooper, uMdemokhrasi, wamemezela ngokusemthethweni inkohlakalo esemthethweni kwi-Dec.
10, 2012. "Ukuba ngaba ngabavoti baphuma kwaye badlulisela into kwaye bayifaka emgangathweni womgaqo-siseko, kumgama obalulekileyo, kude kube njalo kum okanye nayiphi na irhuluneli ukuba iphumelele. "U Uthi uHickenlooper, ochasene nalo mqathango.
Abavoti bavumile uMthetho wokuLungisa iMarijuana ngo-2016. Kodwa ke, uhulumeni akazange aqale ukukhupha iilayisenisi zorhwebo ukuze athengise isigqirha ngokukhawuleza kuba abameli belizwe abazange bavumelane nendlela yokulawula imboni.
Abavoti bavunyelwe ngokusemthethweni ngo-Novemba 2016. Ibhodi ye-Advisory Board ye-Cannabis iyaqhubeka isebenza kwimimiselo kodwa ichazwa ukuba ivumele ukusetyenziswa kwezinto kwiindawo zokuthengisa, ngokungafani nezinye iindawo.
Abavoti baphakamise umbuzo wesi-2 kunyaka-2016, okwenza ubonwabo be-marijuana ngokomthetho ngo-2017.
Abantu abadala abaneminyaka engama-21 nangaphezulu bangaba nefa elilodwa le-cannabis ukuya kwi-ounce ye-concentrated. Ukusetyenziswa koluntu kuhlawuliswe i-$ 600. Umlinganiselo wawunenkxaso evela kuma-55 ekhulwini kwabavoti.
I-Oregon yaba yinkalo yesine yokuvumela ukusetyenziswa kokuzonwabisa kwentshontsho ngoJulayi 2015. Ukugqitywa kwamathambo e-Oregon kwavela ngoluvo lwevoti ngoNovemba 2014, xa ama-56 ekhulwini kwabavoti bexhasa ukuhamba. I-Oregoniya ivumelekile ukuba ibe ne-ounce ye-mariju ekarhulumente kunye nee-ounces emakhaya abo. Baphinde bavunyelwe ukuba bakhule kangako izityalo ezine emakhaya abo.
Isilinganululo sokuvota esavunyelwe eWashington sabizwa ngokuba yi-Initiative 502. Kwakufana kakhulu neColorado's Amendment 64 ngokokuba ivumela abahlali abaneminyaka engama-21 nangaphezulu ukuba bafumane i-ounce ye-marijuana yokuzonwabisa. Umlinganiselo odluliselwe ngo-2012 kunye nenkxaso yama-55.7 ekhulwini kwabavoti kwilizwe. Isicwangciso se- ballot saseWashington sibeka kwakhona iirhafu ezininzi zerhafu ezibekwe kubalimi, abaprofeti kunye nabathengisi. Ireyithi yentlawulo kwi-marijuana yokuzonwabisa kwinqanaba ngalinye li-25 ekhulwini, kwaye ingeniso iya kwi-coffers yesizwe.
IWashington, DC, yasemthethweni ukusetyenziswa kwezogcoba ngo-Febhuwari ka-2015. Lo mqathango wawuxhaswa ngamaphesenti angama-65 kwabavoti kwinqanaba lokuvota likaNovemba 2014. Ukuba ungosikhulu saloo ntlanga, uvumelekile ukuba uphathe ii-ounces ezimbini zegunju kwaye ukhule izityalo ezintandathu kwikhaya lakho. Unako kwakhona "isipho" umhlobo ukuya kwi-pot.
Yintoni i-OH esebenzayo yeQela elibizwayo?
10 Amazwi ngoDkt Josef Mengele, iAuschwitz "Ingelosi yokufa"
Iimpawu ze-Poltergeist Activity